သောကြာနေ့ Terminal: အတွေး Vim [အကြံဥာဏ်အချို့] | Linux မှ
သောကြာနေ့ terminal: စဉ်းစားတွေးခေါ် Vim [အကြံပေးချက်အချို့]
Wada | | သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
ငါအလွန်လျင်မြန်စွာရေးသားခဲ့သော Gif ၏စာလုံးပေါင်းအမှားများအတွက်ဝမ်းနည်းပါသည်
ဒီ post ကိုလွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကဖိုရမ်တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်, ငါငါ့ကိုဘလော့ဂ်ကိုသွားရန်အချိန်, သံသယ, မှတ်ချက်များ, အရာအားလုံးမှတ်ချက်များအတွက်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ကျေးဇူးပြုပြီးကျေးဇူးပြုပြီးပါ မီးမရှို့ပါနဲ့ Vim ကိုသင်မကြိုက်ပါက post မှသာထွက်ခွာပါ
ငါအခြေခံအပိုင်းကိုကျော်သွားလိမ့်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်လိုချင်ရင်ဒါမှမဟုတ်လေ့လာချင်ရင်အရမ်းကျယ်လာလိမ့်မယ်။ terminal ကို run သင့်တယ်။
1 VIM ရှိ Macros များ
3 အခြား command များ
VIM ရှိ Macros များ
၎င်းသည် vim ၏နက်နဲသောအရာများထဲမှတစ်ခုမဟုတ်နိုင်သော်လည်း vim တွင် macro support ရှိကြောင်းသိရခြင်းသည်ကောင်း၏။aအဆိုပါ z ; စတင်မှတ်တမ်းတင်ရန်သင်ရုံနှိပ်ပါ q+အက္ခရာ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းရပ်တန့်ရန်ကျနော်တို့ကိုနှိပ်ပါ q ပြီးတော့အဲ့လို macro မျိုးကိုသုံးဖို့လိုတယ် numero+@+အက္ခရာ.
အက္ခရာအဲဒါဟာသော့ချက်ပဲaအဆိုပါ z.
numeroဖြေ။ ။ အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရမယ်။
ဤသည်အများအပြားထပ်တလဲလဲတာဝန်များကိုလွယ်ကူချောမွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ; ဒီမျဉ်းကြောင်းတွေရှိတယ်ဆိုပါစို့။
'one': 'ဥပမာ' 'one'; 'two': 'ဥပမာ' 'two'; 'three': 'ဥပမာ' 'three'; 'လေး': 'ဥပမာ' 'လေး'; 'ငါး': 'ဥပမာ' 'ငါး';
macros တွေကအရာရာတိုင်းကိုလွယ်ကူအောင်လုပ်ပေးတဲ့နေရာပဲ။ us
qa ငါ '[Esc] ea': [Esc] wi '[Esc] ea' [Esc] wi '[Esc] A'; [Esc] 0j က q
ထို့နောက်ပြောင်းလဲရန်နှင့်အသုံးပြုရန် cursor ကိုမျဉ်းပေါ်တွင်တင်ပါ numero+@+အက္ခရာ ဤကိစ္စတွင်ငါအသုံးပြုခဲ့သည် 4+@+a
Vim ရှိအလွန်အရေးကြီးသောကိရိယာတစ်ခုမှာ၎င်းအားကျွန်ုပ်တို့အစားထိုးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Vim Normal mode တွင်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်နေရာချသည် Esc နောက်ပိုင်းမှာငါတို့နှိပ် : ပြီးတော့ကျနော်တို့ command ကိုရေးပါ ငါ command ကိုပြောကအစားထိုးဖို့ကန့်သတ်မထားဘူး။ အလွန်ဆင်တူသည် RegEx
% s / vim / Vim / g
Vim အားဖြင့်အားလုံး vim လိုင်းများအတွက်အစားထိုးပါ မှတ်စု ငါဆိုင်းဘုတ်မရှိဘူးလျှင် % သင်ရှာနေသောလိုင်းကိုသာရှာလိမ့်မည်
လိုင်း ၃.၅ အကြားရှိအကွာအဝေးတစ်ခုအကြားအစားထိုးပါ။
လိုင်း ၃ မှ ၅ အထိ VIM ကို VIM ဖြင့်အစားထိုးပါ
ဤနေရာတွင်မရှိကြောင်းသတိပြုပါ g အဆုံးမှာကိုက်ညီတဲ့ပထမစာလုံးကိုသာတည်းဖြတ်သည်
ဒီလိုင်းနဲ့အတူaပါတဲ့လိုင်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်ရှားပစ်လိုက်တယ် #
: ။ , $ g / # / ။
လက်ရှိလိုင်း၏ . စာရွက်စာတမ်း၏အဆုံးအထိပါပဲ $ ကိန်းဂဏန်းများကိုရှာဖွေပါ # သူတို့ကိုဖျက်ပစ် d
ဒီနေရာမှာ command ကိုဖိုင်အပိုင်းကိုစီ
: 3, $ မျိုး
စာရွက်စာတမ်းရဲ့အဆုံးအထိလိုင်း ၃ ကနေအမိန့်ပေးလိုက်ပါ
အခြား command များ
ဒီမှာလှည့်ကွက် command ကို၌တည်ရှိ၏ :r ဖတ် hahaha ဖတ်ပြီးသည့်အခါ၎င်းသည်မည်သည့်အရာကိုပြုလုပ်သည်၊ သင်သည်အခြားစာရွက်စာတမ်း၏စာသားကိုထည့်နိုင်သည်၊ သို့သော်ဤဥပမာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ညွှန်ကိန်းကိုထည့်နိုင်သည် ! ၎င်းသည်သီးခြားစီလုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည် vim တူညီသော debug သို့ script တစ်ခုသို့မဟုတ်ဤနေရာတွင်သင်စဉ်းစားနိုင်သည့်ဥပမာတစ်ခုကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
#Date :: r! Date # format နဲ့ရက်စွဲ :: r! နေ့စွဲ + \_% D # စာရင်းလမ်းညွှန်များ :: r! Ls စာရွက်စာတမ်းများ
ငါဘုံ command များသုံးပြီးငါပေမယ့် vim မည်သည့် command ကို၏ output ကိုယူနှင့်စာရွက်စာတမ်းထဲမှာစာသားအဖြစ်ထည့်သွင်း။
ဒီဟာကသေးငယ်တဲ့အပိုင်းပဲ၊ ထပ်ပြီးကျန်သေးတယ် ... ပြီးတော့ငါဟဟားဟားကိုမသိတဲ့အရာတွေ။
နောက်ဆုံးသော်လည်းအနည်းဆုံးတော့ Visual state ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့ကိုအလွယ်တကူကိုင်တွယ်နိုင်ရန်လိုင်းများရွေးချယ်နိုင်သည်။ အမြင်အာရုံရွေးချယ်မှုသုံးမျိုးရှိပါတယ်။
V လိုင်းများအားဖြင့် Visual
ထိန်းချုပ်မှု+v လုပ်ကွက်အားဖြင့် Visual
v% သင်ကွင်း၏အစ / အဆုံးမှာရှိလျှင်
အခြေခံအားဖြင့် gg သည်အစသို့သွားသည်။ အမြင်အာရုံ selector V ကိုရိုက်ထည့်ပါ; နှင့်အဆုံး G. အသွားပါ။
[control] v e5j C [စာသားကိုရေးပါ] [esc] [esc]
ပြီးတော့မင်းက visual selector ကို block တွေနဲ့ရိုက်ထည့်ပါ ထိန်းချုပ်မှုv, ငါစကားလုံးရဲ့အဆုံးမှတိုးနှင့် 5j ကိုဆင်း5လိုင်းများ, ငါကို C နှင့်အတူစကားလုံးဖျက်။ ငါစာသားကိုအစားထိုးနှိပ် Esc Esc.
အခြားအတူတူပင်ပေမယ့်အစား၏ c ၎င်းသည် delete နှင့် insert mode သို့သွားသည် ငါသုံးတယ် i အဆိုပါ mode ကိုငါတည်နေရာရှိရာ mode ကိုငါဝင်။
ကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့အရာအားလုံးဟာလျှို့ဝှက်ဆန်းကျယ်ပုံပေါက်သလိုမျိုးဒါမှမဟုတ် vim ninja hahaha လိုအရာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် vim manual ထဲမှာမရှိပါဘူး။ Vim မှာငါသိတဲ့အကောင်းဆုံးမှတ်တမ်းတစ်ခုရှိတယ် စာရွက်စာတမ်းများကိုရိုက်ထည့်ရုံသာဝင်ပါ
: help: w
၎င်းသည်သင့်အားဆွေးနွေးမည့်အပိုင်းသို့တိုက်ရိုက်ခေါ်ဆောင်သွားလိမ့်မည်။ w စောင့်.
အခုဆိုရင် ... မင်္ဂလာ Vim ကလူ။ 😀
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ » သောကြာနေ့ terminal: စဉ်းစားတွေးခေါ် Vim [အကြံပေးချက်အချို့]
ငါ Vim using ကိုစတင်သုံးမယ်ထင်တယ်
Rodrigo bravo ဟုသူကပြောသည်
မျှဝေခြင်းအတွက်အလွန်ကောင်းတဲ့ဆောင်းပါးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါပိတ်ပင်တားဆီးမှုအားဖြင့်ရွေးချယ်ခြင်းအကြောင်းကိုမသိခဲ့ပါ။ ရွှင်လန်း!
Rodrigo Bravo အားပြန်ပြောပါ
အပြာရောင် ဦး ခေါင်းခွံ ဟုသူကပြောသည်
Emacs ... ငါထင်တာကတော့တစ်ယောက်ယောက်ကဒါကိုပြောဖို့လိုတယ်၊ ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်ထပ်ပြီးစောင့်ရမှာလဲ D: မဟုတ်ဘူး၊ ဒါက Flame ရဲ့အစမဟုတ်ဘူး။ Emacs နဲ့ Vim ကြားမှာဆွေးနွေးမှုမရှိပါဘူး။ D နှင့်မျှမအီး Vim;) ။
Bla bla bla ဟုသူကပြောသည်
ဟုတ်တယ်၊ မီးတောက်ရဲ့အစဖြစ်တယ်။ ထိုမှတ်ချက်များကိုဂရုမပြုပါနှင့်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ဆောင်းပါးနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်အရာမျှအထောက်အကူမပြုပါ။ လေးစားပါတယ်
Emacs! Emacs! Emacs! ၏
« […] တစ်ယောက်ယောက်ကဤသို့ပြောရမည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ » Hahaha, +1!
ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံကိုကြည့်ရှုသူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကထူးခြားဆန်းပြားသောကစားနည်းကိုကစား။ “ မြားများဖြင့် cursors? WASD? ဟင့်အင်း၊ ငါလမ်းကိုငါပြမယ်
@Blablabla: ကောင်းပြီ၊ သင့် nick သည်သင်၏စကားများနှင့်အညီနေနိုင်သည်။
ကောင်းတယ် Vim သည်အကောင်းဆုံး text editor ဖြစ်သည်။ ဒီ site ပေါ်တွင်မကြာခဏထုတ်ဝေသူကပြောကြားသည်။ လေးစားပါတယ်
Vim မှာ macros တွေကိုနားလည်ဖို့အမြဲတမ်းပြproblemsနာတွေရှိခဲ့ဖူးတယ်၊ အဲ့ဒီ့အချိန်မှာတော့ငါကငါလှည့်ဖျားပေးပါလိမ့်မယ်
မွတ္စု: KDE အသုံးပြုသူများအတွက် Vim-QT use ကိုသုံးပါ
နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်၏ Galaxy Mini တွင်ရှင်သန်ရန်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုထပ်ရှိလာပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တွင် EMACS မရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်တွင် VIM ရှိသည်။
သင့်ရဲ့ vimrc ကိုဝေမျှရန်အမြင်အာရုံနှစ်သက်အလွန်နားလည်သည် :) !!! ငါသည်သင်တို့ကိုငါနှင့်အတူမျှဝေမျှော်လင့်ပါတယ် :)!
wow ဒါအရမ်းကြည့်ကြည့် :) ဟားဟား၊ ငါထပ်လေ့ကျင့်ရမယ်၊ မင်းရဲ့ vimrc ကအရမ်းကောင်းတယ် Oo! ငါသည်သင်တို့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးမျှဝေမျှော်လင့်ပါတယ်;)!
စင်စစ်အားဖြင့်၎င်းသည်ဤမျှလောက် vimrc မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ငါဟဟားဟားပြုခဲ့ကြောင်းရှင်းပြပါလိမ့်မည်
haha အများကြီးပိုကောင်း :)! ဒါကြောင့်ငါတို့ရှိသမျှသည် haha ​​ကျေးဇူးတင်စကားသင်ယူ!! 😉
အကြံဥာဏ်ကောင်း Wada ။ အမှန်တရားကတော့ကျွန်မရဲ့ပရိုဂရမ်လိုအပ်ချက်တွေဟာအလွန်အခြေခံကျပြီး Vim ရဲ့အလားအလာကိုကျွန်တော်တစ်ခါမှမမြင်ဖူးဘူး။ ဒါပေမဲ့မင်းပြောတာကမင်းအတွက်စိတ် ၀ င်စားစရာပါ။ ငါတစ်ခုခုလုပ်ဖို့လိုတဲ့အခါငါကလက်တွေ့အလေ့အကျင့်ထားရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
ယောနသန်သည် Leonel Gasparrini ဟုသူကပြောသည်
အသုံးပြုသူများအသစ်အတွက်“ vimtutor” သည်အင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်ပြီး၊ စပိန်လိုနည်းပြကိုလိုချင်သူများအတွက်“ vimtutor es” ကိုသာရိုက်ပါ။
ငါ vim ကိုကြိုက်တယ်၊ သူမပါဘဲငါ့ဘဝလုံးဝကွဲပြားခြားနားလိမ့်မည်!
ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကို ၂ နှစ်ကြာအသုံးပြုခဲ့ပြီးနေ့တိုင်းကျွန်ုပ် ပို၍ အံ့အားသင့်မိပါသည်။ =)
P / D: .vimrc ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံကိုကြည့်ချင်သောသူမည်သူမဆိုကျွန်ုပ်ကိုကြည့်ရှုရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ =) https://github.com/jlgasparrini/dotvimrc
Jonathan Leonel Gasparrini အားပြန်ပြောပါ
Slackware 14.1: ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ကို Enable